HAZAKAZAKA SY FIZAHANTANY : Hiditra amin’ny andiany fahatelo ny “Trail d’Ibity” amin’ity taona ity
Hiditra amin’ny andiany fahatelo indray ny hetsika “Trail d’Ibity” amin’ity taona ity. Ny Trail d’Ibity dia ilay hazakazaka arahina fizahantany fanao ao amin’ny tendrombohitry ny Kaominina Ibity, Distrikan’Antsirabe faharoa ka ny andron’ny alahady 18 jona ho avy izao no hanaovana izany any an-toerana. 17 mai 2017
Nampahafantarina ny mponin’Antsirabe ny alakamisy 11 mey lasa teo ny fitohizan’ity hazakazaka an-tendrombohitra fanao eto Vakinankaratra ity satria teo aloha dia ny Naoxime groupe no nikarakara izany fa amin’izao fotoana dia ny “Antenna Madagascar” indray no nikarakara ny fanohizana ny hetsika.
Raha ny nambaran’ny mpikarakara, Nathalie Rasoanaivo dia ho fanohanana ilay toeram-pamokarana “Spiruline”, ao Ibity, tantanin’ny fikambanana “Antenna Madagascar” no hanaovana ny hazakazaka isan-taona mba hahazoana vola hampihodinana ilay toeram-pamokarana io akora fanampin-tsakafo ho fanampiana ny ankizy marefo io.
Nohamafisin-dRasoanaivo Nathalie fa i Vakinankaratra ihany fa mbola isan’ny lasibatra amin’io tsy fanjarian-tsakafo io, indrindra fa ny ankizy, ka raha ny “Maison de la Nutrition et ferme Gérard Galus” izay ao Ibity no nosahanin’izy ireo dia mikasa ny hanokatra toeram-pikarakarana ankizy eto Antsirabe ihany koa izy ireo, amin’ny alalan’ny vola hiditra amin’ity hazakazaka ity.
Mikasika ilay hazakazaka dia hizara telo dia ny 30km ho an’ny olona mihoatra ny 20 taona, ny 12km ho an’ny 12 ka hatramin’ny 14 taona ary ny 2km ho an’ireo ankizy. Ankoatra ny fanangonam-bola ho an’ny fanohanana ny ankizy ny hetsika dia isan’ny fitarihana ny olona ihany koa hizaha tany amin’iny faritra arovana ao amin’ny tendrimbohitr’Ibity iny ihany koa izany. Fanirian’ny mpikarakara, araka izany, ny hitomboan’ny mpandray anjara satria raha 880 ny mpandray anjara tamin’ny taon-dasa dia heverin’izy ireo fa ho tonga hatrany amin’ny 1 000 any ho any izany.
Efa misokatra any Antananarivo sy Antsirabe ny fisoratana anarana ho an’ireo liana amin’ny hazakazaka arahina fizahantany mahafinaritra toa itony. Marihina fa eo ambany fiahian’ny Federasiona malagasin’ny Atletisma tanteraka ny hetsika rehetra, ary misy ny fiaraha-miasa amin’ny Vokovoko mena sy ny mpitandro filaminana mandritra ny hetsika rehetra.